Oppo မှသူတို့ကဖန်သားပြင်အောက်ရှိကင်မရာများသည်ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းရှိသည်ဟုဆိုကြသည် Androidsis
Ignacio Sala | | Android ထုတ်ကုန်များ, အခြားကိရိယာများ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် မျက်နှာပြင်အောက်ကင်မရာများ၏နည်းပညာတိုးတက်လာပုံနောက်ဆုံးတော့နည်းပညာတစ်ခု ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်နှာပြင်ရှိအပေါက်များ၊ periscopes များမှဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် နှင့်ထုတ်လုပ်သူများကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာရှေ့မျက်နှာပြင်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဆောင်းပါးတွင် Oppo ထုတ်လုပ်သူနှင့် Xiaomi မှဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပြပေးပါမည် ကင်မရာရဲ့လည်ပတ်ပုံကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ သို့သော်ဖမ်းယူမှု၏ရလဒ်ကိုမပြသပါ၊ အရည်အသွေးသည်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့လက်ခံနိုင်သောအရာများထံမှဝေးကွာနေဆဲဖြစ်သည်။
စုံလင်သော, notchless စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်အတွေ့အကြုံကိုရှာဖှသေူမြားအတှကျ - မိန်းမောတွေဝေခြင်းမှပြင်ဆင်လော့။ ?
သင်တို့သည်ငါတို့၏အောက်မှာ-Display ကို selfie ကင်မရာနည်းပညာမှာအလွန်ပထမဦးဆုံးကြည့်နေကြသည်။ RT ကို! ? pic.twitter.com/FrqB6RiJaY
- OPPO (@oppo) ဇြန္လ 3, 2019
အခုအချိန်မှာတော့ဒီနည်းပညာကဒီနည်းပညာကိုပြောနေတယ် ရှေ့ခရီးရှည်ကြီး ထုတ်လုပ်သူက၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်နေသော်လည်းလက်ရှိရရှိသောနည်းပညာသည်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိကင်မရာကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည့်နိမ့်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းရန်ခွင့်မပြုပါ။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးသောနည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းကိုမစွန့်စားခဲ့ပါကဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မရကြပါ။ ထိုသတ္တိရှိသူများကြောင့်အခြားကုမ္ပဏီများသည်ထိုအမှားများမှသင်ခန်းစာယူပြီးထိုတိုးတက်လာသောနည်းပညာကိုပင်စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် Oppo သည်စွန့်စားမှုပြုရန်နှင့်ဤနည်းပညာကိုထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ဟုမထင်ရ။ Oppo ၏ဒုဥက္ကpresident္ဌ၏အဆိုအရသူတို့သည်စောင့်ဆိုင်းရန်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် လက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးကိုပေးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ခြင်းမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
အခုအချိန်မှာ Oppo နှင့် Huawei တို့သည်ဤနည်းပညာ၏အခြေအနေကိုပြသသောတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ကသာအလုပ်လုပ်ကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည် Apple, Samsung နှင့် Huawei နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဤနယ်ပယ်တွင်သူတို့၏တိုးတက်မှုကိုပြသရန်အမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Oppo မှသူတို့ကဖန်သားပြင်အောက်ရှိကင်မရာများသည်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်ဟုဆိုကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတော်အလျင်စလိုလက်စားချေမှုကို ၇ ရက်ကြာယူရို ၃.၁၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်